Khiyaamada ugufiican ee looga faa iideysan karo Safari-ka ku jira iOS | Wararka IPhone
Khiyaamada ugufiican ee looga faa iidaysto Safari macruufka (1/2)
Had iyo jeer way wanaagsan tahay in wax badan laga barto toobiyeyaasha iyo tas-hiilaadka uu mid kasta oo ka mid ah barnaamijyadiisa hooyo ee iOS uu na siin karo. Waa inaan sheegnaa in Safari uu yahay biraawsarka webka ee loogu isticmaalka badan yahay iPhone iyo iPad sababo muuqda awgood, sidaa darteed, waxaan diiradda saari doonnaa khiyaanooyinkeeda oo ah ujeeddada lagu horumarinayo waxyaabahaan. Sidaas, Galabnimada Axada waxaan kuu soo qaadaneynaa tabaha ugu wanaagsan ee aad uga faa'iideysan karto Safari-ka ku jira iOS. Waxaad ogaan doontaa kuwa badan, kuwa kale oo badan oo aadan ogaan doonin, sidaa darteed, waxay kuu oggolaaneysaa inaad wax badan ka hesho oo aad ugu raaxaysato qalabkaaga. Soo gal, ha moogaanin khiyaanooyinkeenna oo iskaashi la yeelo taada.
1 Load desktop-ka xamuulka ah - Xamuul bilaa xannibaado
2 Dhawaqa indhaha oo xiran
3 Ka raadi qoraal bog
4 Ku dar liiska akhriska si aad hadhow uhesho qadka
5 Adeegso aragtida akhristaha
Load desktop-ka xamuulka ah - Xamuul bilaa xannibaado
Badanaa nooca mobilada ee boggaga internetka qaarkood waxay leeyihiin astaamo yar, ama macno ahaan waa masiibo in la isticmaalo, waana sababta aan u door bidno nooca buuxa. Si tan loo sameeyo, waa inaan ku riixnaa badhanka cusbooneysiinta ee Safari muddo dheer, qiyaastii laba ama saddex ilbiriqsi. Kadib waxay na siin doontaa menu macno leh. Liiskan wuxuu ka koobnaan doonaa laba fursadood, oo ah soo dejinta websaydhka desktop-ka, ama kan ku shubista websaydh la'aanta xannibaade.s of content (haddii aan iyaga ku rakibnay). Sidaa darteed, waqti ka waqti waad iska badbaadin kartaa inaad aadeyso kombuyuutarka si aad u qabato howlaha aad rabto ee ku saabsan boggaga internetka ee moobiilka oo leh waxyaabo yar.
Dhawaqa indhaha oo xiran
Shaqadani waxay noo oggolaan doontaa inaan dib u soo celino tabskii aan si qalad ah ugu xirnay iyagoon ogeyn, ama waxaan dooneynaa inaan dib ugu laabanno hagitaan. Si tan loo sameeyo, waxaan ku fureynaa dhowr-daaqad Safari oo leh badhanka midig ee hoose, ka dibna waxaan uga tagi doonnaa farta oo ku cadaadinaysa calaamadda «+»Taasi waxay u muuqataa wax yar oo ka hooseeya xarunta. Tab cusub ayaa soo muuqan doona oo loo yaqaan «xidhan Dhawaan»Oo aan ku arki karno tabsyadaas oo aan xirnay daqiiqado ka hor.
Ka raadi qoraal bog
Badanaa waxaan galnaa bog u muuqda tusaale ahaan casharro, laakiin waxaan raadineynaa nuxur gaar ah mana dooneyno inaan gebi ahaanba akhrinno dhammaan ereyada qoraalka. Si fudud, guji bar cinwaanka oo qor ereyga aan raadineyno, cabsi la'aan. Natiijooyinka ka mid ah waxaan heli doonnaa degello iyo raadinta Google, laakiin xagga hoose, shaqadu way soo muuqan doontaa «Boggan (x natiijooyinka)». Kani wuxuu ahaan lahaa mashiinka raadinta safari ee iOS, wax la mid ah waxa aan ka helno Safari ee macOS markaan riixno toobiye "cmd + F" bogga internetka. Xaqiiqda cajiibka ah?
Ku dar liiska akhriska si aad hadhow uhesho qadka
Anaga tafatirayaal ahaan, qaar badana qaarna yar, laakiin uguyaraan shaqsiyan waxbadan ayaan u adeegsadaa shaqadan. Markaad shabakadda ka baarayso waxaan helayaa xoogaa waxyaabo aan aad u jeclahay oo aan u malaynayo inay muhiim tahay inaan kula wadaago, waxaan ku darayaa "liiska akhriska". Hawshan ku taal Safari waxay noo oggolaaneysaa inaan kaydinno degellada qaarkood si aan hadhow ugu akhriyi karno gebi ahaanba qadka. Sidee loo sameeyaa? Si fudud, ka mid ah badhannada hoose waxaan leenahay midka aan wadaagno, kaas oo, sidaad ogtahay, waliba ushaqeynaya kordhinta. Waa hagaag, riixitaanka badhankaas wuxuu furayaa menu-ka caadiga ah ee macnaha guud leh, iyo howlaha hoos ku xusan (kuwa kordhinta) waxaan leenahay mid dhaha Ku dar liiska akhriska ». Haddii hadhow aan rabno inaan galno liistadaas akhriska, adigoo gujinaya taariikhda (badhanka leh buug ku yaal xagga hoose), liiska akhrisku waa menu-ka dhexe oo lagu metelo muraayado (sida Steve Jobs oo jidka ag jooga).
Adeegso aragtida akhristaha
Markii aan baarayno degel leh waxyaabo badan oo qoran laakiin taasi sidoo kale waxaa ka buuxa badhanno iyo shaqooyin kale oo dheeri ah, way fiicantahay in la isticmaalo aragtida akhriska. Websaydhada badan, astaan ​​ay metelaan 4 xariiq oo toosan ayaa ka soo muuqan doonta dhinaca bar cinwaanka. Markii la riixo, bogga ayaa loo rogi doonaa qaabka akhriska, qaabkani wuxuu noo oggolaanayaa inaan wax ka beddelno dhinacyada bogga, qoraalka iyo waxyaabaha ku jira sida haddii ay yihiin buug iBooks ah, waa wax cajiib ah marka ay timaaddo daalacashada websaydhka qadiimiga ah. ama waxyaabo fog.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Khiyaamada ugufiican ee looga faa iidaysto Safari macruufka (1/2)
Tabaha wanaagsan. Ma aanan aqoon dhowr ka mid ah. Mahadsanid !!
Habeen wanaagsan: qaybta "Ku dar liiska akhriska si aad hadhow uga aragto khadka tooska ah" Waxaan tijaabo ku sameeyay maqaalkan waxayna ii sheegaysaa in "safari uusan furi karin bogga maxaa yeelay lama heli karo akhriska qad la'aanta"; Waxaan baaray internetka waana aqriyay inay taasi dhacdo hadii ay jiraan qoraalo aan qoraal cad aheyn, ama leh Scripts ama koodhadh gudaha ah oo mamnuucaya qabashadooda, ma awoodi doono inaan ku arko offline-ka, ma runbaa?
Waxay umuuqataa mid wax ku ool ah ikhtiyaarka lagu raadinayo bogga weedho gaar ah, guji fagaaraha fallaarta oo raadi ikhtiyaarka oranaya "ka raadi bogga"
Ma aqaan ... Waa ra'yigeyga
Waad sameyn kartaa casharro ayaa lagu sharraxay meel ka sarreysa waxna ma caddayn ugu yaraan aniga ahaan
Ku jawaab Genaro
Salaan !! Aad u xiiso badan, laakiin way fiicnaan laheyd in lagu daro ikhtiyaarka lagu buuxinayo lambarka sirta ah ee safari, waa mid aad wax ku ool u ah maadaama xulashadan ay shaqeysay waxaad kaliya dhigeysaa furaha sirta ah hal jeer, bogagga aad u baahan tahay inaad gasho, waxaad siisay si aad u keydiso furaha sirta ah iyo goorta ay tahay inaad dib-u-gasho Mar dambe uma baahnid inaad ku soo noqotid boggaas markii aad geleyso magacaaga iyo isgarad-sirtaada, maxaa yeelay Safari waxay daryeeshaa auto-dhammaystirka, aniga ahaan waa wax aad u macquul ah, marwalba waxaan isticmaalaa ikhtiyaarkan.
Ku jawaab Yovanny
Jordy horeyba wuxuu u sheegay mid ka mid ah waxyaabaha aan dhihi doono, laakiin Load Desktop Version - Load Bilaa Balotoolayaal sida Ka hel qoraalka bogga sidoo kale waxay ku yaalliin fagaaraha falaarta iyo qaab aan u maleynayo inay ka sahlan tahay.
IPhone leh processor Intel? Waan ka shakisanahay, way iska dhigi doontaa uun